IPanther Itshise iNkosana @ Belmont Plantation
I-Belmont Plantation ikwiDelta yaseMississippi kwaye isembindini weBlues Trail. Uya kuyithanda indawo yam ngenxa yembali, i-ambiance, i-vintage charm, kunye noxolo & nokuzola. Indawo yam ilungile kumaqabane, abantu abahamba bodwa, abahambi ngezoshishino, nabahlobo abanoboya (izilwanyana zasekhaya). Ukuhlala kwakho kubandakanya isidlo sakusasa esigcweleyo kwi-Platation house enkulu, amanyathelo kuphela!
Wamkelekile eBelmont Plantation, Est 1857 entliziyweni yeDelta yaseMississippi! Indlu enkulu ine-9000 sq ft, amagumbi okulala ayi-8, kunye neebhafu ezisi-7- sinikezela ngegumbi ngalinye ukuba lirente ngokwalo kuquka iPanther Burn Cabin.
Ikhabhinethi ifudunyezwe kwaye ipholile ngenkqubo yayo yokwahlula-hlulwa encinci eyigcina ikhululekile ngokugqibeleleyo unyaka wonke kwaye ilawulwa ngokupheleleyo nguwe, lundwendwe lwethu. Ngaphakathi uya kufumana impahla yakudala egqwesileyo, iilinen ezithambileyo, kunye negumbi lokuhlambela elitsha kraca elinesepha encomekayo kunye neshampu. Uyakunikwa namanzi asebhotileni, iitawuli ezintsha, ukwehlisa inkonzo, kunye ne-wifi. Kwaye ikhabhinethi kuphela kwepropathi ene-TV yayo- i-LCD entsha ye-smart TV enamajelo asisiseko, i-Netflix, kunye namajelo afunwayo afana ne-HBO, unomathotholo we-intanethi, kunye neentlobo ngeentlobo zeziteshi zokusasaza zeprimiyamu ezibandakanya iindaba, indlela yokuphila, kunye uthungelwano lwezemidlalo.
Esi sakhiwo, iPanther Burn Cabin, yindlu yamakhoboka yoo-1830s ukusuka kwiPanther Burn Plantation ekhoyo kumazantsi eBelmont. Ikwasetyenziswa njengekhabhathi yabaqeshi bezityalo kunye neofisi yezonyango yamafama asekuhlaleni kunye neentsapho zabo ukutyelela ugqirha wamasimi. Yafuduselwa eBelmont ngo-2017 kwaye yabuyiselwa ngobuchule ekuhambeni konyaka. Zonke iibhodi zomsipres ezibanzi ziyintsusa kulwakhiwo lokuqala ngeminyaka yee-1830s ngelixa i-beadboard yee-1850s kwigumbi lokuhlambela isuka kulungiso lwamva olubandakanya iifestile ezintsha kunye neengcango ezintsha ezinehenjisi ezihonjiswe kakuhle, ekunokwenzeka ukuba zisusela ekudilizweni kwendlu enkulu kwipropati. .
Esi sisakhiwo sokugqibela esisindileyo ukusuka kwintsomi iPanther Burn Plantation...
Onsite, uya kubanjwa ngu Miss Camille Collins kwaye unikwe ukhenketho lwembali; UCamille ngumzala womnini wangoku weBelmont kunye nomnini weBelmont ukusuka kwi1940s! Unokucebisa izinto ezibonwayo zasekhaya kunye nemisebenzi, akuncede ngezicwangciso zesidlo sangokuhlwa, okanye akuvumele ukuba wonwabele uxolo kunye nokuzola kweBelmont ekufuneka ibonelele.
Onsite, uya kubanjwa ngu Miss Camille Collins kwaye unikwe ukhenketho lwembali; UCamille ngumzala womnini wangoku weBelmont kunye nomnini weBelmont ukusuka kwi1940s! Unokucebisa iz…